Aakar May 22, 2009
Listen this audio by Ghimiray Sunil.
च्यात्तिसक्यो तिम्रो धोती, कति अझै बटार्दैछौ,
खुस्किसक्यो तिम्रो बोली, कति अझै सपार्दैछौ !
विचरा को खुट्टा तानी, अनि के नै गर्ने तिम्ले,
तिम्रो हुति छैन भन्दै, कति अझै कोतार्दैछौ !
बाँकि रह्‍यो नेपाल नै, विर हुँ भनि देखाउनलाई,
त्यसलाई पनि फेल भन्दै, कति अझै लोपार्दैछौ !
बुढो बरु खाँटि रै'छ, कुबेला मै आँप झारे,
वृध्दलाई माया गर, कति अझै झपार्दैछौ !
Eternal May 22, 2009 at 4:40 PM
Keep it up sunil..
Unknown May 22, 2009 at 7:49 PM
व्यंग्य कविता रमाइलो लाग्यो मलाई पनि!! लेख्दै गर्नु!!